कस्तो चल्यो सुदूरपश्चिममा छायांकन गरिएको विराजको ‘साङ्लो’ ? | Dinesh Khabar
कस्तो चल्यो सुदूरपश्चिममा छायांकन गरिएको विराजको ‘साङ्लो’ ?
२०७६ फाल्गुन ९, ०७:४१
गएको माघ २४ गते प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘साङ्लो’ ले अभिनेता विराज भट्टको स्टारडम पुनः फिर्ता गरेको चर्चा सुरु भएको छ। चार वर्षपछि नेपाली फिल्ममा कमब्याक गरेका उनले निर्देशन, निर्माण र अभिनय गरेको यो फिल्मको इनिसियल बक्सअफिस आक्रमक भएपछि यस्तो चर्चा कमाएको हो।
प्रदर्शनको दोस्रो दिन शनिवार सिंगल थिएटरमा ठूलो कमाई गरेको फिल्मले आज शुक्रवारबाट तेस्रो हप्तामा प्रदर्शन थालनी गर्दैछ। अभिनेता भट्टले अहिले सम्म फिल्मको कमाई गोप्य राखेका छन्। तर वितरकले भने ‘साङ्लो’ ले राम्रो कमाएको दावी गर्दै आएका छन्।
यस्तै ४ वर्षपछि नेपाली फिल्ममा फर्किएका अभिनेता भट्ट ‘साङ्लो’ को सिक्वेल निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। दर्शकबाट सिक्वेलको चर्को माग आएका कारण आफू ‘साङ्लो २’ को बारेमा सोचिरहेको उनले बताए। ‘साङ्लो’ अधिकासं सुदूरपश्चिममा छायाङकन भएको चलचित्र हो।
२०७६ चैत्र १९, ०९:२२
पूर्वाञ्चलका प्रसिद्ध साहित्यकार उपेन्द्र पागलको आज ७७ वर्षका उमेरमा निधन भएको छ। एक वर्षदेखि दमरोगबाट पीडित पागलको आफ्नो जन्मस्थान सुनसरी, मधेशा ७ मा निधन भएको हो। … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १९, ०६:४५
बन्द छ देश, भ्रष्टाचार खुल्ला
बन्द छ देश, भ्रष्टाचार चाहिँ खुल्लानीति विधाता नेता कानुन भन्दा ठुला … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १८, ०३:०५
भारतकी गायिका लता मंगेशकरले विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङक्रमण रोक्नको लागि महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्रीको राहत कोषमा २५ लाख सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। … विस्तृतमा